Xaqiiqooyinka Isticmaalka Mobilada iyo Internetka ee Waayeelka, Sawirada, iyo Tirakoobka | Martech Zone
Infographic: Muwaadin Waayeel ah iyo Tirakoobka Isticmaalka Internetka
Talaado, July 30, 2019 Talaado, July 30, 2019 Nikola Djordjevic
Aragtida aan waayeelka u adeegsan karin, fahmi karin, ama rabin inay waqti ku qaataan khadka tooska ah ayaa ku baahsan bulshadeenna. Si kastaba ha noqotee, ma waxay ku saleysan tahay xaqiiqooyin? Waa run in Millennials ay xukumaan isticmaalka internetka, laakiin dhab ahaantii ma jiraan wax yar oo Boomers ah oo ku jira shabakadda adduunka oo dhan?
Uma maleyneyno sidaas oo waxaan ku dhownahay inaan caddeynno. Dadka waayeelka ahi waxay aqbalayaan oo adeegsanayaan teknoolojiyada casriga ah tirooyinka sii kordhaya maalmahan. Waxay ogaanayaan faa'iidooyinka barashada sida loo isticmaalo laptops, casriga ah, iyo xitaa dab xaqiiqada dhabta ah.
Waa kuwan xaqiiqooyin ku tusaya xaqiiqda dhabta ah sida jiilalkii hore ee bulshada maanta u adeegsadaan internetka.
Immisa iyo Imisa
Tirada dadka waayeelka ah ee internetka dhab ahaantii aad ayey u badan yihiin. Magac ahaan, ugu yaraan 70% dadka da'doodu tahay 65 iyo wixii ka sareeya waxay waqti ku qaataan khadka tooska ah maalin kasta.
Celcelis ahaan, jiilka da'da ahi waxay ku qaataan qiyaastii 27 saacadood khadka tooska ah usbuucii.
- Medalerthelp.org, Waayeelka & Websaydhka Adduunka
Intaa waxaa dheer, dadka waayeelka ah ayaa xaqiiqsaday faa'iidada ugu weyn ee internetka — helitaanka bilaashka ah ee macluumaadka aan xadidnayn! Sidaa darteed, cilmi baaris ayaa muujineysa in ugu yaraan 82% dadka waayeelka ah waxay isticmaalaan makiinadaha raadinta si ay macluumaad uga helaan mowduucyada ay xiiseynayaan.
Waayeelka badankood waxay hubiyaan Cimilada
Mid ka mid ah sababaha ugu waawayn ee waayeelka ay internetka ugu galaan waa in la hubiyo cimilada (qiyaastii 66%). Waa xaqiiqo la wada og yahay in markasta oo aad sii weynaato aad u nugul tahay isbeddelada kadiska ah ee xaaladaha cimilada, sidaa darteed ka hubinta khadka tooska ah waa hab fiican oo diyaar loogu ahaado
Si kastaba ha noqotee, dadka da'da ah waxay u isticmaalaan internetka waxyaabo kale oo badan sidoo kale. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah dukaamaysiga, macluumaadka ku saabsan cuntada, ciyaaraha, rasiidhada iyo qiimo dhimista, iyo sababo kale oo badan.
Waayeelka Ma Ku Xiriiriyaan Intarneedka?
Moodo kale oo aan ka haysanno dadka waaweyn ee nagu hareeraysan ayaa ah inay weli ku tiirsan yihiin khadka taleefannada guryaha si ay ula xiriiraan asxaabtooda iyo qoyskooda. In kasta oo taasi qaar ka mid run tahay, haddana uma baahna sida dadka qaar u malayn karaan.
Saddexda hab ee ugu weyn ee looga wada xiriiro internetka ayaa ah emaylka, barnaamijyada fariimaha la isu diro, iyo barnaamijyada warbaahinta bulshada. Qiyaastii 75% dadka da'da ah waxay la xiriiraan xubnaha qoyskooda iyagoo adeegsanaya ugu yaraan hal barnaamij fariin. Labada ugu caansan waa FaceTime iyo Skype maaddaama kuwani ay aad u fududdahay in lala xiriiro fiidiyoowga loona diro sawirro.
Qalabkee Ugu Badanaa La Isticmaalaa?
In kasta oo aan waddo dheer u soo maray isu soo dhaweynta waayeelka iyo teknolojiyadda, haddana weli waxaa jira meel lagu hagaajiyo. Tusaale ahaan, taleefannada gacanta ee caadiga ahi wali waxay ku badan yihiin jiilalkii hore marka la barbar dhigo taleefannada casriga ah. Markasta oo aad sare u kacdo qiyaasta da'da, waxa sii weynaanaya farqiga u dhexeeya adeegsiga taleefannada gacanta iyo taleefannada casriga ah.
Tusaale ahaan, 95% dadka jira 65-69 waxay isticmaalaan taleefannada gacanta, halka 59% ay isticmaalaan taleefannada casriga ah. Si kastaba ha noqotee, 58% dadka da'doodu ka weyn tahay 80 waxay isticmaalaan taleefannada gacanta, laakiin keliya 17% ayaa adeegsada taleefannada casriga ah. Waxay umuuqataa in taleefannada casriga ahi wali cabsi gelinayaan dadka waayeelka ah, laakiin isbeddelladani hubaal sida ugu dhaqsaha badan ayey isu beddeli doonaan.
Tirooyinkan Waxaa Laga Filayaa Inay Kordhaan Mustaqbalka
Lambarada laxiriira internetka iyo waayeelka aad ayey mar horeba u dhiirigalinayaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa la filayaa inay si dhakhso leh u koraan mustaqbalka dhow. Maaddaama jiilalka da'da yar ee horey u haystay amar wanaagsan oo tiknoolajiyad casri ah ay gaboobayaan, boqolkiiba dadka waayeelka ah ee farsamada aqoonta u leh ayaa sidoo kale kori doona.
Xitaa aragti dheeri ah oo ku saabsan mawduucan, hubi faahfaahinta soo socota ee loogu talagalay Medalerthelp.
Tags: isticmaalka internetkatirakoobka telefoonka gacantaisticmaalka mobiladadadka waayeelka ah
Nikola Djordjevic, MD, Madaxa Mawduuca ee MedAlertHelp.org. Wuxuu ka imanayaa Serbia, Nikola waa dhakhtar daawo oo bilaabay mashruucan sanadka 2018 dartiis hamigiisa ah inuu caawiyo dadka kale, gaar ahaan waayeelka. Marka laga reebo dib-u-eegista nidaamyada digniinta caafimaadka, wuxuu kaloo qoraa baloog loogu talo galay caafimaadka, gabowga, howlgabnimada, iyo mowduucyada kale ee waayeelka la xiriira.
Sawirka: Naqshadeynta, Nooca, iyo Iskaashiga Guud ee Ganacsiga